Mogadishu Journal » 2020 » November » 8
Dybala ayaa ka maqnaan doona xulka Argentina isreebreebka Koobka Adduunka ee soo socda
Paulo Dybala ayaa seegay labadii kulan ee furitaanka isreebreebka Koobka Adduunka ee Argentina waxaana ciyaaryahanka Juventus haatan laga reebay kulamada bishaan. Weeraryahanka kooxda Juventus Paulo Dybala ayaa laga saaray xulka Argentina ee isreebreebka Koobka Adduunka ee soo...
Turkish finance minister Berat Albayrak resigns: Instagram post
Resignation of Albayrak, who is also President Erdogan’s son-in-law, comes a day after central bank governor was sacked. 9 Nov 2020 Turkish Finance Minister Berat Albayrak has said he is stepping down citing health reasons, according to a statement on his verified Instagram...
Abiy Ahmed oo eryey taliyihii ciidanka, madaxii sirdoonka iyo wasiirkii A/Dibedda xilli dagaalka uu kasii darayo
Ra’iisul Wsaaraaha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa xilalka ka qaaday taliyihii ciidamada, madaxii sirdoonka iyo wasiirkii arrimaha dibedda, ayada oo militariga ay maalinkii shanaad wadaan dagaal ka socda gobolka Tigrayga. Abiy Ahmed ayaa shaqo ka eryiddan ku dhawaaqay maanta, ayada oo...
Donald Trump oo diiday inuu ogolaado in laga adkaaday, tallaabo-na qaadaya Isniinta
Donald Trump ayaa diiday inuu aqablo natiijada doorashada madaxweynaha Mareykanka, kadib markii lagu dhowaaqay inuu ku guuleystay Joe Biden. Trump, oo golf ku cayaarayey Waqooyiga Gobolka Virginia ee deriska la ah Washington markii tratnka lagu kala baxay, ayaa soo saaray bayaan...
Safiirka Qadar iyo Ugaaska beesha Xawaadle oo kulmay
Safaaradda Qatar ee Soomaaliya ayaa kulan muhiim ah xaruntoda magaalad Muqdisho kula leh Ugaaska Beesha Xawadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugas Rooble, kaas oo ku saabsan arrimo xasaasi ah oo ku saabsan gobolka Hiiran. Ilo waredyo aad ugu dhaw Safaaradda Qatar ee Muqdisho ayaa...
DF oo Axmed Madoobe ku celisay guddiga doorashada, kana hor-timid laba arrin
Warar ka soo baxaya vila somaliya ayaa sheegayaa in dib loogu celiyay maamulka Jubaland 8-da xubnood ee guddiga doorashooyinka heer dowlad gobaleed, kadib markii la sheegay in Villa Somalia dacwad uga gudbisay beesha caalamka. Xukuumadda Soomaaliya ayaa dalbatay in guddiga oo ay...
Mahdi Guuleed oo weeraray guddoomiyaha Aqalka Sare
Muqdisho:-Ra’iisul wasaare ku xigeenka dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleed (Khadar) oo wareysi gaar ah siiyey Horufadhi Media TV ayaa weerar afka ku qaaday guddoomiyaha golaha aqalka sare, Mudane Cabdi Xaashi Cabdullahi. Mahdi Guuleed ayaa wareysigan ku sheegay in guddoomiyaha...
Jeesow oo soo jeediyey in la baabi’iyo mid ka mid ah wasaaradaha DF + Sababta
Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa maanta laga hor akhriyey warbixino laga soo diyaariyey saameynta Coronavirus dhaqaalaha iyo ganacsiga Soomaaliya uu ku yeeshay. Waxaana xogihii lagu soo bandhigay kulanka golaha aragtiyo ka dhiibtay...